eduScrum - ကျောင်းသားများ၊ ဆရာများနှင့် Agilists တို့အတူတကွသင်ယူသည်
စိတ်ဝင်စားသူလေ့လာလိုသူများအတွက် Sessions မှကြိုဆိုပါသည်
eduScrum မှကြိုဆိုပါသည်၊ ယနေ့သင်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်လိုသနည်း။
တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ eduScrum ကိုရှာဖွေပါ
သင်တန်း & အစီအစဉ်
သင်၏ eduScrum အခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းကိုကြိုတင်မှာယူပါ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း eduScrum လေ့ကျင့်သူများ
eduScrum Walls of ... (ဥပမာ၊ မာန၊ 'Happy Bugs')
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်စိတ် ၀ င်စားပါသလား။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာအတွက်စာရင်းပေးသွင်းရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးသတင်းလွှာများကို ကြည့်ရှုနိုင်သည် (ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ)။
မင်းငါတို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ချင်လား။ သို့ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါ ၀ င်မှုကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲဖိတ်ခေါ်ပါ
ome လာ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့လက်ဖက်ရည်ဆွေးနွေးပွဲများသို့လာပါ
Facebook က တွစ်တာ Youtube ကို linkedin
သင်ကစပ်စုသောရှာဖွေသူများ၊ သုတေသီများနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိသူများနှင့်သက်ဆိုင်ပါသလား သွက်လက်မြန်ဆန်သောသင်ယူမှု၊ သင်ကြားမှုနှင့်ပူးပေါင်းဖန်တီးမှုတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ပင်လား။
"ဒါပေမယ့်အားလုံးထက်၊ Ximena ကဒီမူဘောင်တွေကဆန်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို Agile ကိုစိတ် ၀ င်စားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူကသူ့ကျောင်းသားတွေဆီကနေသင်ယူလေ့လာရတာကိုကြိုက်တယ်။ "
Ximena Valente-HviereduScrum ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ကိုအောင်မြင်ပါစေ
“ ကလေးတွေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေကသူတို့ရဲ့သင်ယူမှုအတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ခံစားရတဲ့ပြုစုပျိုးထောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးတာကိုငါယုံကြည်တယ်၊ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနိုင်တယ်၊ ပူးပေါင်းဖို့သင်ယူတယ်၊ ကစားရတာရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပြောတတ်တယ်။ ”
Emmanuel ponchoneduScrum ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ကိုအောင်မြင်ပါစေ
"ဒီချဉ်းကပ်မှုတွေနဲ့သူကလူတွေကိုနားလည်ဖို့ကူညီချင်တယ်၊ ပိုနက်နဲတဲ့အဆင့်၊ ငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့စိတ်သဘောထားကအိမ်မှာ၊ အလုပ်၊ ကျောင်းမှာငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလွှမ်းမိုးတယ်။ ယုံကြည်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကငါတို့မိသားစုတွေ၊ အသင်းတွေ၊ စာသင်ခန်းတွေမှာဘယ်လောက်စာနာမှုရှိလဲ၊ သတိရှိမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုသူတို့၏ပေါင်းစည်းမှု၌အပြည့်အ ၀ ထောက်ပံ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တုံ့ပြန်မှုမှဆက်စပ်မှုသို့ပြောင်းနိုင်သည်။ ”
Paulina Orbitowska-FernandezeduScrum ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ကိုအောင်မြင်ပါစေ
"ကျောင်းသားတွေယုံကြည်မှုနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတည်ဆောက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုတိုးတက်လာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရတာအရမ်းလှပြီးအားတက်စရာပါ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ ငါကကိုယ့်ကိုစည်းရုံးရေးမှူးတစ်ယောက်အနေနဲ့မြင်တာ။ သူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်။ ပျားမွေးမြူတဲ့သူကသူ့ပျားတွေအတွက်လုပ်ပေးတယ်။
Mark PostemaeduScrum ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ကိုအောင်မြင်ပါစေ
"ငါ eduScrum ကိုသိလာကတည်းကငါသင်ကြားရေးသင်ယူသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပညာရေးရဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အညီငါသုံးနိုင်တဲ့အံ့သြဖွယ်နည်းလမ်းဘောင်တစ်ခုကိုငါတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ သူမ/သူမကိုယ်တိုင်၎င်းအားရှာဖွေတွေ့ရှိရန် "
Kristina FritscheduScrum ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ကိုအောင်မြင်ပါစေ
Agile နည်းလမ်းများသည်ခေတ်သစ်ပညာရေးကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီးလူနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးသည်အမှတ်အသားများနှင့်တရားဝင်အစီရင်ခံစာများထက်ပိုအရေးကြီးသည်ဟုငါယုံကြည်သည်၊ လူတိုင်းသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတူတကွဖန်တီးနိုင်သူဖြစ်သည်။
Ekaterina BredikhinaeduScrum ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ကိုအောင်မြင်ပါစေ
“ ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုငါပိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကယုံကြည်မှုပဲ။ ကျောင်းသားတွေကသူတို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုသူတို့တာဝန်ယူတယ်၊ သူတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့နေရာပေးတယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာကျောင်းသားများပါ ၀ င်သည်၊ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းလာပြီး၎င်းတို့၏ရလဒ်များသည်ပိုကောင်းလာသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့တိုးတက်လာတာကိုမြင်ရတာအရမ်းအံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။ ”
Willy WijnandseduScrum ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ကိုအောင်မြင်ပါစေ
“ တိုးတက်မှုများသည်ဝေဖန်မှုကိုဖြစ်စေသည်သာမကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များလည်းဖြစ်စေသည်။ လက်ရှိနှင့်လိုက်ဖက်သောထိရောက်သောဆန်းသစ်သောသင်ကြားမှုပုံစံသို့ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းသို့သွားနေသည်။ ”
Claudia StruijlaarteduScrum ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ကိုအောင်မြင်ပါစေ
ကျောင်းသားများ၊ ဆရာများနှင့် agilists များအတူတကွသင်ယူခြင်းမှုတ်သွင်းသည်
[ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များရယူရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒသဘောတူညီချက်များ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းများနဲ့အခြေအနေများ.]
နှင့်ဖွဲ့ ♥ & သိချင်စိတ်!
မူပိုင်ခွင့်eduScrum® & AgileLivingRoom 2021/2022